Sanduuqa duufsiga kalluumeysiga Plain Manufacturers & Suppliers
Taxanaha Jaalaha ah Sanduuqa Kalluumeysiga Dibadda
Taxanaha huruudda ah ee sanduuqyada khasnadaha lagu gashado kalluumeysiga waxaa laga sameeyay waxyaabo qaro weyn, adag oo adkeysi leh. Naqshadeynta unugyo badan ayaa sahleysa in la keydiyo. Midabka translucent wuxuu fududeeyaa aqoonsiga aaladaha gudaha. Rug tayo sare leh, kala duwanaansho codsi badan. Waa shey loo baahan yahay in loo helo kalluumeysigaaga banaanka.
Midabka: Transparent / huruud
Sanduuqa Kalluumaysiga Cagaaran Sanduuqa Xamaasadda Daahsoon
Taxanaha cagaaran ee sanaadiiqda kalluumeysiga, isku darka midabbada cagaaran iyo kuwa hufan, ayaa aad ugu dhow dabeecadda. Naqshad macquul ah, fududahay in la qaado, fududahay in la isticmaalo, farshaxan wanaagsan, ilaalinta deegaanka iyo cimri dhererkeedu waa astaamaheeda iyo faa'iidooyinkeeda. Waxay ku dari doontaa nacnac safarkaaga kalluumeysiga.